पुरुषलाई महिलाको स्त’नमा किन यति धेरै चासो ? – Annapurna Post News
पुरुषलाई महिलाको स्त’नमा किन यति धेरै चासो ?
April 14, 2022 sujaLeaveaComment on पुरुषलाई महिलाको स्त’नमा किन यति धेरै चासो ?
महिलाको स्त’नमा पुरुषको चा’सो धेरै अघिदेखि नै देखिँदै आएको हो तर यसको सर्वमान्य वि’कासक्रमिक व्याख्या अहिलेसम्म उ’पलब्ध छैन । यसमा अनुसन्धान भने भइरहेका छन् । त्यसो त विज्ञानले ठूला प्रश्नहरूको उत्तर खो’जिरहेको हुन्छ । हामीहरू अहिलेको अ’वस्थामा कसरी आइपुग्यौं ? अहिले विज्ञानले यो प्रश्न सोधिरहेको छ : पुरुषलाई महिलाको स्त’न किन यति धेरै मन पर्छ ?
सा’इकोलो’जी टुडे नामक पत्रिकामा मानवशास्त्री रोबर्ट डी मार्टिनले यस विषयमा एक स्तम्भ लेखेका छन् । महिलाले स्त’नपा’न गराउनैका लागि स्त’न बनेको हो भनिन्छ तर दु’ग्ध उ’त्पादन गर्ने महिलाको क्ष’मता स्त’नको आ’कारसँग स’म्बन्धित छैन (कम्तीमा ग’र्भाधानअघि त छैन) । हर्मो’नको स्तर र स्त’नको आ’कारबीच स्पष्ट स’म्बन्ध देखिएको छैन । त्यसोभए किन पुरुषले महिलाको स्त’न मनपराउन थालेका हुन् त ? अलि पहिलेको वैज्ञानिक अ’नुमान अनुसार-
स्त’नहरूले बोसो स’ञ्चिति गर्छन् त्यसैले हाम्रा शि’कारी सं’कलक (ह’न्टर–ग्या’दरर) पू’र्खाहरूले खान न’पाउने स्थितिमा त्यो स’ञ्चिति उपयोगी हुन्थ्यो । तर त्यो कुरा सत्य हुन्थ्यो भने पुरुषहरूले महिलाको शरीरका अन्य भागमा जमेका बो’सोलाई पनि उ’त्तेजक मा’न्नुपर्ने हो । त्यसैले यो अ’नुमान प’त्याउन सकिन्न ।
अर्को एक लो’कप्रिय सिद्धान्त चाहिँ जोडीहरूबीचको नि’कट स’म्बन्ध (बोन्डिङ) सँग जो’डिएको छ । स्ना’युविज्ञानका अध्ययनहरूले महिलाका नि’प्पलहरूलाई दु’ग्धपान गर्ने बच्चाले वा यौ’नसाथीले उ’त्तेजित पार्दा उनीहरूमा ओ’क्सीटोसिन भरपूर हुने र त्यो निकट सम्ब’न्ध बनाउने हर्मो’न भएको साबित गरेका छन् । त्यसैले स्त’नमा अतिरिक्त ध्यान दिने पुरुषले आफ्नो यौ’नसाथीलाई प्र’भावित पार्न सक्छन् र महिलालाई आफ्नो सन्तान ज’न्माउनका लागि विश्वस्त तुल्याउन सक्छन् । यस सि’द्धान्तको बारेमा तपाईंको धा’रणा के हुन्छ कु’न्नि तर यसमा पुरुषहरूले निःस्वा’र्थीपना देखाएको लाग्छ जुन अ’स्वा’भाविक छ । तर यसले सम्बन्धमा नि’कटताको सिद्धान्तलाई व्याख्या भने गर्छ ।
बेलायती मानवशास्त्री एडवर्ड ड’ट्टनले चाहिँ स्त’नको विकास नि’तम्ब जस्तो देखिने हिसाबमा भएको बताएका छन् । हाम्रा प’रापूर्खाहरूले जनावर झैं पछाडिबाट यौ’नकर्म गर्ने गर्थे र समयको कुनै विन्दुमा आएर उनीहरूले आ’मनेसामने भएर यौ’नकर्म गर्न थाले ।
वि’कासक्रमको इतिहासको यो क्षण ए’कदमै म’हत्त्वपूर्ण थियो किनकि अनुहार हे’राहेर गरेर गरिने यौ’नकर्मसँगै लामो समयसम्म तथा ती’व्रताका साथ गरिने च’क्षु स’म्पर्क (आई–टु–आई क’न्ट्याक्ट) को विकास भयो जुन कुरा स’न्तानोत्पादनमा यसअघि उपयोग गरिँदैनथियो ।मानव प्र’जातिका लागि अनुहार हेराहेर गरेर गरिने यौ’नकर्मले ल्याएको ग’म्भीर मानवशास्त्रीय परिवर्तनका बारेमा धेरै किसिमका अ’नुमानहरू पाइन्छन् । यस्तो यौ’नकर्मले जोडीको स’म्बन्ध गहिरो बनाउन राम्रो योगदान गरेको हुनुपर्छ । डट्टनले यस परिवर्तनको एक परिणामका रूपमा महिलाका स्त’नहरू वि’स्तार भएर क्ली’भेज बनेको हुन सक्ने तर त्यसले पुरुषलाई नि’तम्बको क्य्रा’कको अ’नुभव गराएको हुनसक्ने धारणा राखेका छन् ।
वि’कासक्रम मनोवैज्ञानिक फ्र्यांक मार्लोले स’म्भवतः सब’भन्दा रमाइलो त’र्क प्र’स्तुत गरेका छन् । उनको न्युबिलिटी हाइपोथेसिस (यौ’नका लागि तयार बन्ने उमेर सिद्धान्त) ले पू’र्ण विकसित स्त’नले जवानीको र ऊर्वरताको सं’केत दिने कुरा राख्छ । हाम्रा परापूर्खाहरूले क’म्मरमाथिको भाग नढाकिकन हिँड्ने गरेका थिए अर्थात् महिलाका स्त’नहरू पनि खुलै हुने गर्थे । भाषाको विकास हुनुअघि कुनै पनि वयस्क मानवको उमेर जान्ने कुनै उपाय थिएन, देखिने शरीरविज्ञानका संके’त मात्रमा भर पर्नुपर्थ्यो ।
महिलाहरूको उमेर बढ्दै जाँदा गु’रुत्वाकर्षणको भारले स्त’नहरू झो’ल्लिन थाले । त्यसैले महिलाको छातीमा भएका मां’सपि’ण्डबाट पुरुषहरूले उनको उमेरको अनुमान गर्न थाले यद्यपि त्यो अनुमान अ’चेतन तहमा गरियो । यु’गौंयुगपछि अनि हजारौं पुस्तापछि पुरुषहरूलाई जवान स्त’न भएका महिलासँग यौ’नक र्म गर्नका लागि भि’त्रैबाट इच्छा आउन थाल्यो र त्यसले सन्तानो’त्पादनमा सफलता दिलाउने औ’सत बढायो अनि उनीहरू अलि जवान महिलासँग यौ’नक र्म ग र्न थाले ।
पुरुषले चाहेको जस्तो स्त’न भएका महिलाले स’न्तानोत्पादनमा पनि राम्रो सफलता पाए र त्यसले गर्दा मानवहरूमा स्थायी रूपमा फुलेका स्त’न देखिन थाले जुन अन्य कुनै पनि स्त’नधारीमा देखिँदैन । मानवजातिको लाखौं वर्षको विकासपछि अहिले स्त’नप्रतिको आ’कर्षण सबै वि’षमलिं’गी पुरुषहरूमा पाइन्छ । यो सिद्धान्त पढ्दा त राम्रै लाग्छ तर यो नै सत्य हो त ? अनि यसमा सांस्कृतिक त’त्त्वहरूको पनि कुनै भूमिका छ कि यो जैविक वि’कासक्रम मात्र हो ? अनि प्राकृतिक छनोट अहिले पनि लागू हुन्छ भने पुरुषले भविष्यमा कस्ता किसिमका स्त’नहरूलाई आ’कर्षक मान्लान् ?
६.३ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पको धक्का
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, २०७९ बैशाख २ गते शुक्रबार, नयाँ बर्षको पहिलो दिन तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
जव सासु नै ज्वाईसंग सल्केर बच्चा पनि जन्माइन्..
April 13, 2022 suja
वैशाख ९ गते राति नेपाली आकाशमा देखिने छ अनौठो दृश्य
हरेक पु’रुषले वि’वाह अघि बोल्ने यी झुट, तपाईंले पनि बोल्नु भयो कि
April 23, 2022 suja